“ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသည့်အမျိုးသားများ၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌” (လွတ်လပ်သော၊ ယူကေ) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn
“ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသည့်အမျိုးသားများ၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း” (Independent, UK)
Porn စွဲဆေးသည်ရောဂါလက္ခဏာပြသည့်ရောဂါမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအသက်အရွယ်အားလုံးမှယောက်ျားများဖြစ်သောကြောင့်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းကိုစွဲလမ်းပုံရသည်။
လုလင်တို့သည်ကြား Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမြင့်တက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ထင်မြင်ချက်များဒီညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ရှိမရှိအဖြစ်ခွဲခြားထားတယ်။
လေ့လာရေးကြောင်းညစ်ညမ်းအားလုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တောင်းဆိုမှုများရာခိုင်နှုန်း 25 အကြောင်းကိုပါဝငျနှင့်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်အများကြီးအတူတူပင်လမ်းမှာရှိတဲ့ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့အလားအလာရှိပါတယ်လိင်ဘဝတွေကိုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်များစွာသောလူတို့သညျအဘို့, up ပြုလုပ်ပေးရထင်ရသောမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သို့သျောလညျးအခြို့သောရှိသည်။
'' တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းရှိပါတယ်PornFreeသူတို့အားကိုအောင်မြင်စွာ porn အကူအညီနဲ့တစ်ခုစွဲနှင့်အတူရုန်းကန်နေသူတို့အားအပ်တော်မမူတော့တဲ့သူဘယ်မှာ Reddit အပေါ် '' ယောက်ျား။ ဒါဟာအဘယ်သူ၏အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးပြီနာမည်ကျော် '' NoFap '' အသိုင်းအဝုိင်းထံမှကွဲပြားခြားနားပါတယ်။
"ဒီ NoFap လူအစုအဝေး '' ထွက်ရှိပါတယ် 'ဆိုတဲ့ PornFree subreddit နှိုင်းယှဉ်အနည်းငယ်ပိုဖြစ်ပါတယ်" ဟုပုံမှန်ပိုစတာဂျက် * ရှင်းပြ အဆိုပါလွတ်လပ်သော.
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာမကောင်းဘူး၊ ခေတ်သစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင်လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တီထွင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေထက်တစ်နာရီအတွင်းပိုပြီး virtual virtual partner တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ ။ "
"ဤသည်နှင့်တူလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလူဤအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်မှ OK ကိုခံစားရပါစေ," မကြာသေးမီကနှစ်နှစ် porn-အခမဲ့အမှတ်အသားလွန်သူ PornFree အဖွဲ့ဝင်ဂျေဆန် *, ကိုပြောသည် အဆိုပါလွတ်လပ်သော။ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲတာကို ၀ န်ခံတာကောင်းတယ်။
ရပ်ရွာ၏အင်္ဂါအများရှိလိုပဲ, သူစွဲအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းဖြေရှာသောအခါအဘယ်သူကိုမျှမပြောခဲ့ပါဘူး "ငါအငယျဆုံးသောအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့သိပ်ကြောက်," ဂျေဆန်ကရှင်းပြသည်။
လူတစ်ဦးကအများကြီးနောက်ဆုံးတော့ porn အရှုံးမပေးရန်ဆုံးဖြတ်ဘို့အလွန်ဆင်တူပုံပြင်များနှင့်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ တချို့သည်ကိုယ်မထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုမှကျွန်များကဲ့သို့ခံစား၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖွင့်: "ငါစွဲလမ်း၏ဟမ်းစတားဘီးပေါ်တွင်ဖြစ်ခြင်း၏ပင်ပန်းခဲ့သောကွောငျ့အကြှနျုပျကိုညစ်ညမ်းအရှုံးမပေးဖို့အတှကျအဓိကတွန်းအားဖြစ်ခဲ့သည်," 44 နှစ်အရွယ် Dave * ဖလော်ရီဒါကနေပြောသည် အဆိုပါလွတ်လပ်သော.
အိုင်ဒါဟိုမှသည် 21 နှစ်အရွယ်ယာကုပ်အမျိုးကို * သည် feeling သူ့ရည်းစားထွက်ခွာ, porn သူ၏ဆကျဆံရေးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့တယ် "မလုံခြုံခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလျစ်လျူရှု။ "
"ငါသည်ငါချစ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးမည့်အန္တရာယ်မှာအခါဒါဟာအတွက်နှိုးဆော်ချက်ခဲ့သည်" ဟုသူကသူပြဿနာများနှင့်သူလည်းညစ်ညမ်း-အခမဲ့တိုးတက်ကောင်းမွန်မယ်လို့သွားမျှော်လင့်သည့်အခါသူကညစ်ညမ်းတဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားဖြစ်ချင်ကြဘူးကြောင်းဖြည့်စွက်, ကရှင်းပြသည် မိမိအလိင်ဘဝ။
ကောလိပ်မှအရွယ်ဂျော့ခ်ျသည် NoFap အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပထမဆုံးပါဝင်ပတ်သက်ပြီးနောက် PornFree သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော်အလွန်အမင်းကြီးလွန်းကြောင်းသဘောပေါက်လာသည် -“ တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေတာကကျန်းမာသန်စွမ်းတယ်၊ porn ကပြtheနာဖြစ်တယ်လို့ငါယုံကြည်လာတယ်။ "ဟုသူကရှင်းပြသည် အဆိုပါလွတ်လပ်သော.
လူတို့သညျလမျး၌ porn အကြောင်းကိုသောက်စရာအကြောင်းပြန်လည်အရက်ဆွေးနွေးပွဲပြောဆိုပါ။ ထိုအဆိုစွဲဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေနဲ့တူတာကလွယ်ကူမဟုတ်ပါဘူး။
နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သူ Dave အတွက်မူအလွန်တရာခက်ခဲသည်။ သူသည်အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ယာကုပ်သည်အလားတူအသက်အရွယ်ဖြစ်သည်။ သူသည်အသက်ရှစ်နှစ်မှကိုးနှစ်အတွင်းပထမဆုံးသော porn ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ၁၃ နှစ်မပြည့်မှီတိုင်အောင်မှန်ကန်စွာကြည့်ရှုခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်ပေးတာဟာကျွန်တော့်အတွက်အခက်ခဲဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ “ ဒီကနေ့မှာငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တတ်ဘူး၊ တော်တော်သိသိသာသာတိုးတက်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကတော့ငါလုံးဝပြန်ကောင်းလာပြီးရံဖန်ရံခါ 'ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ခြင်း'
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်သောအမျိုးသားများအတွက်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာမှုသည်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြသနိုင်သည်ဟုယာကုပ်ရှင်းပြသည် - အချို့လူများသည်အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းကိုပျက်ကွက်ပြီးညစ်ညမ်းသောအရက်သောက်ခြင်းကိုသွားကြသည်။ ရုံတစျခုရှိခြင်းပြီးနောက်။
“ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စအရကျွန်တော့်အမှားတွေကတစ်ရက်မှာဗီဒီယိုတစ်ချောင်းမှသုံးခုထက်မကကြည့်ရတာ ၃ ရက်ထက်မကကြည့်တာပါ” ဟုယာကုပ်ဝန်ခံသည်။ “ ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုပါ။
ဒါပေမယ့်သူက 11 ခဲ့ကတည်းကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ရဲ့နဲ့အပြည့်အဝ, ကတက်မပေးသောသူဂျော့ခ်ျ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရပ်တန့်ထက် porn ဝေးပိုမိုလွယ်ကူဖြတ်တွေ့သူတစ်ဦးရည်းစားရှိပါတယ်သည့်အခါနောက်တဖန်အဆုံးစွန်သောစွန့်လွှတ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
"porn ကိုကြည့်နီးပါးမျှငွေကြေးကုန်ကျမှာပါလုပ်ဖို့ဒီတော့လွယ်ကူသောကြောင့်ဒီရက်စီးကရက်သို့မဟုတ်အခြားဘုံစွဲဖြတ်ထက်နေဆဲခက်ခဲ [porn တက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်]" ဟုသူကထောက်ပြသည်။
သူက "အလင်းတန်းများဖြာ" တွင်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲတတ်ခြင်းနှင့် up ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ခက်ခဲဘိန်းဖြူဖြတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ယုံကြည်နေပါတယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဂျော့ခ်ျအစီအမံ။
ဂျက်သူရဲ့ကပြောပါတယ် "ဤမျှလောက်များစွာသောအဆင့်ဆင့်ပေါ်မှာမရှိဘဲပိတ်ထားကောင်း၏။ "
“ ကျွန်တော်ဟာပိုပြီးယုံကြည်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လွယ်မှု၊ လုံ့လရှိမှုနဲ့ဘဝနဲ့ပိုပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိပါတယ်။ သူကသူ၏လိင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ (လူအားလုံးအတွက်) နှင့်ပိုမိုရှင်းလင်းသော ဦး နှောက်များကိုပိုမိုလေးမြတ်တန်ဖိုးထားခြင်းရှိကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Dave ရဲ့ဘဝ porn ဖြတ်ကတည်းကပြောင်းလဲသွားပြီအဓိကနညျးလမျးတစျခုသညျမိမိမိသားစုဝင်များနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေး "ကိုအလွန်တိုးတက်လာသည်။ " ကြပြီဖြစ်ပါတယ်
သူကသူသည်“ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုအတွက်ပိုမိုကတိကဝတ်ပြုခြင်း” ပိုကောင်းသည့်အိပ်စက်ခြင်း၊ အလုပ်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်သူ၏ကြောက်ရွံ့မှုများမှပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိဟုပြောကြားခဲ့သည် -“ ကျွန်တော့်ဘဝဟာကျွန်တော့်အကြောင်းမဟုတ်တော့ပါ၊ ”
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့၏အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ Reddit ပျေါတှငျဖိုရမ်ဂုဏျတငျ။
"ဒီ PornFree အသိုင်းအဝိုင်းငါ့အဘို့မျှော်လင့်ချက်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အားပေးစကားတစ် Beacon ခဲ့," ယာကုပ်အမျိုးကိုဝန်ခံသည်။ "ဒါဟာ, ငါ့ကိုငါ့အကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အလေ့အထနားလည်သဘောပေါက်ကူညီပေးခဲ့သညျငါ့ချို့ယွင်းချက်ကြိုဆိုနှင့်သင်ကဲ့သို့တူညီသောလှေ၌နေသောလူများ၏တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းပေးပါသည်။
"PornFree အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးအပါဆုံးကတော့ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပဲ။ ငါမှာအကူအညီတောင်းခံနိုင်ဖို့နဲ့တခြားညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ထွက်ပေါက်ရှိတယ်။ "
"ငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူ၏အစောပိုင်းကာလ၌, ကငါတယောက်တည်းနှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်အတွက်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောပဲ" ဟု Dave ကပြောပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်သူတို့လုံးဝလူတိုင်း porn တက်ပေးခြင်းအကြံပြုလိုကသူတို့၏ဇာတ်လမ်းများကိုနားထောငျနှင့်လေးစားမှုကိုမခံစားရဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်ပြောစကားပြောခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားရန်လိုအပ်သည်ဟုယာကုပ်ယုံကြည်သည် -“ သင်သည်သင်၏စွဲလမ်းမှုကိုဝန်ခံခြင်း၊ သင်၏ဘဝမှမည်သည့်အရာများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်တင်းကျပ်သောကိုယ်ပိုင်ကုဒ်နံပါတ်များကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်ဟုသူကပြောသည်။ စွဲသည်ဖြစ်စေမသည်လူအားလုံးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများ။
Dave သဘောတူပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်းမလုံလောကျဟုထင်၏: "ကအရှုံးမပေးသူကိုလူတွေကတကယ်ပဲသူတို့နှင့်အတူစတင်ပြုလုပ်စားသုံးခဲ့ကြအဘယ်ကြောင့်ဆနျးစစျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်အလေ့အထများနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအစားထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
"သူတို့ကအမှန်တကယ်လူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်အလုပ်လုပ်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ "
ထိုနေ့၏အဆုံးမှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကသဘာဝဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့ (ဖြစ်ကောင်း) ထောင်စုနှစ်ထိုသို့လုပ်နေပါပြီ။ porn, သို့သော်, အထူးသဖြင့်ယခုကြှနျုပျတို့သိဘယ်လောက်တစ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခေတ်သစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျကပြောကြားခဲ့သည် အဆိုပါလွတ်လပ်သော မည်မျှသည်သူ၏ငယ်ရွယ်အထီးမိတ်ဆွေကသူတို့ရဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသပေးဖို့ Viagra လာပြီစဉ်းစားခဲ့သညျ။ သူကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ် porn ဖြတ်အကြံပြုပြီးနောက်ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ပြဿနာသှားကွ၏။
သို့သော်ဂျော့ချ်အတွက်မူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်ရန်ကြိုးစားရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည် -“ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်ခြင်း၏နာကျင်မှုကိုလက်ခံစေခြင်းအားဖြင့်သင်သည်လူများကိုအခိုင်အမာပြောဆိုခြင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ အပြင်ထွက်ပြီးသင်မလုပ်ချင်သောအခြားအရာများ။
မင်းအပြင်မှာမိန်းကလေးတွေနဲ့အပြင်မှာရှိနေရင်ဘာဖြစ်လို့ porn ကိုကြည့်ရတာလဲ ဒါကရေရှည်မှာလူတစ်ယောက်ကိုဖန်သားပြင်မှာရှိတဲ့ kinky pixel တွေထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်စေမှာပါ။ ”